बाबुराम तेस्रो लिङ्गी ! - Jhilko
बाबुराम तेस्रो लिङ्गी !
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) लाई कुनै समय तेस्रो लिङ्गी भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्तिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईलाई नै यतिबेला तेस्रो लिङ्गी भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदवादी र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जनगणतन्त्रका लागि वैचारिक र भौतिक रुपमा भीषण ढंगले लडिरहदा तत्कालीन नेकपा एमाले न कांग्रेस न त कम्युनिस्टको अडानमा भयो, यो त तेस्रो लिङ्गी भएको बाबुरामको जिकिर थियो ।
विगतका मुद्धामा फर्किदा र कतिपय मुद्धामा उनी अहिले पनि कम्युनिस्ट झैं लाग्छन । अनि आफूलाई लोकतान्त्रिक देखाउन भगीरथ प्रयासरत पनि छन् । उनको जोड भनेको दुई ठूला पार्टीबाट अलग्गै तेस्रो धार बनाउने हो । बैकल्पिक राजनीति मार्फत अस्तित्वको खोजी गर्ने हो ।
उनको तर्क छ, अव देशमा तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ । उनले भन्ने गरेका छन्, नयाँ शक्ति, विवेकशील, विवेकशील साझा र संघीय समाजवादी फोरम मिल्नुको विकल्प छैन । यी पार्टीहरु अस्तित्वमा आउने हो भने यिनीहरुबीच ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ । उनी विश्वस्त छन् कि अवको केही वर्षमै यी पार्टीहरुबीच पक्कै एकता हुने छ ।
त्यो बीचको धारको पार्टीको वैचारिक, आर्थिक नीति के हो भन्नेबारेमा उनले स्पष्ट पारेका छैनन् । हरेक पार्टी विचार र आफ्नो वर्गको सेवामा जोडिनुपर्छ । उनले नाम लिएका पार्टीका धेरैजसो नेतृत्व विगतमा कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा जोडिएका होइनन् । उनीहरुको मुद्धा भनेको अहिले क्रियाशील ठूला दुई पार्टीको गलत क्रियाकलाप र कार्यशैलीको विरोध गर्दै आफ्नो जनमत निर्माण गर्ने कोशिश मात्र देखिन्छ । बाबुराम त स्पष्ट दृष्टिकोण र संघर्षसहित आफ्नो राजनीतिक उचाइ कायम गरेका नेता हुन ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेतासमेत रहेका बाबुराम भट्टराइले १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टी चटक्कै छाडेर काँगेस वा कम्युनिष्ट कुनै पनि पहिचान हुन नसकेको नयाँ शक्ति गठन गरी नयाँ राजनीतिक यात्राको थालनी त गरेका छन् तर त्यो पार्टी दिनदिनै विघटन भइरहेको छ । कमजोर भइरहेको छ । विहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै उनको पार्टीले जनताको मनोविज्ञान समेटेर ठूलो र बलियो होला भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका छैनन् । स्वयम् बाबुरामलाई पनि त्यति धेरै विश्वास नलागेरै होला दुई ठूला पार्टीको विपक्षमा लागेका ससाना पार्टीलाई जोडजाम गरेर एउटा तेस्रो ठूलो पार्टी बनाउने अवधारणा । उनले भनेका पार्टीलाई जोडजाम गरेर नयाँ पार्टी बनाउँदा पनि उखाने नेता चित्रबहादुर केसीले भने जस्तै पुरेतका दाने गाई जस्तै हुन्छन । निर्वाचन र अहिलेसम्म आउँदा उनले जोडेका धेरैजसो मान्छेहरु आआफ्नो गोठमा फर्किएनन् र ?
विप्लवले अहिलेको सरकारले राजनीतिक ढंगले नै डिल गर्न खोजेको देखिन्छ । विप्लवलाई फौजी गतिविधि छाडेर राजनीतिक ढङ्गले ल्याउन पहल गरे सरकारले बाबुराम भट्टराईलाई पनि सम्मान गर्छ । जानेर वा नजाने विप्लव राजनीति भन्दा पनि प्रतिशोधी बाटोमा गएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विवादित र दुर्घटनामा पु¥याउन खोज्दैछन । विप्लवले उठाएको मुद्धा र स्पिरिटको कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टले विरोध किन गर्ने र ? अनि बाबुरामले पनि विप्लवलाई घुमाएर समर्थन गर्छन । यसमा उनको पुरानो क्रान्तिकारी भावना अझै लुकेको नै संकेत गर्छ ।
बाबुराममा अझै बेलाबेलामा देखिने क्रान्तिकारीपनलाई बुझेर होला कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्तिममा बाबुराम पुरानै घरमा फर्किने बताए । मोरङको पथरी शनिश्चरेमा आयोजित एक कार्यक्रममा नयाँ शक्तिका कार्यकर्ताहरुलाई नेकपामा प्रवेश गराउँदै मन्त्री ढकालले एकता र सहकार्यले मात्र मुलुक समृद्ध हुने भन्दै बाटो बिराएर गएका डा भट्टराई ढिलो चाँडो पुरानै घरका रुपमा रहेको नेकपामा फर्किने बताए ।
कार्ल माक्र्सले लिएको नीतिलाई नयाँ सन्दर्भमा परिमार्जित गर्नुपर्ने बताउने बाबुराम माक्र्स, लेनिन, माओ, विपी कोइराला सबैका राम्रा विचारलाई समेटेर आफू नयाँ यात्रामा हिँडेको बताइरहेका छन् । प्रष्ट विचार भएको कम्युनिस्ट र कांग्रेसको विपक्षमा रहेका सबैलाई समेट्ने कुरा गरिरहेका छन् । उनको यस प्रकारको खिचडी सिद्धान्त र व्यवहारले जनतालाई प्रष्ट्याइरहेको छ कि थप भ्रम पैदा गरेको छ ?
तेस्रो लिङ्ग निर्माण गर्नुभन्दा बाबुराम भट्टराईलाई नेकपामा नै उच्च सम्मान छ । त्यहाँ नभए नेपाली कांग्रेसमा पनि उनलाई सम्मान नै हुन्छ ।
कांग्रेसको विचारमा पनि आकर्षण अनि कम्युनिस्टको विचार पनि त्याग्न नसक्ने बाबुरामको यो अकर्मण्यताले रेखा थापाले सडकमा नाच्न गाएको गीत जस्तो ‘कि लाउ माया म तिर कि लाउ माया ऊ तिर, नलाउ दुई तिर’ मात्र पारेको छ ।
शान्ति र समृद्धिका लागि नयाँ अभियान ः गृहमन्त्री
पाटे बाघले बर्दियामा मान्छे मार्यो
बाघले आक्रमण गरेको ठाउँदेखि झण्डै २५ मिटर घिसारेर लगेको छ । बाघले मृतकको घाँटीमा...
सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिल धनकौल र महालक्ष्मी सुगर प्रालिले १० वर्षदेखि उखुको...